Training | Talent Highway | Jobs in Myanmar
Our services for employer
Suggestion and Requirement
Job Blog & Information
Consultancy profile & Services
Client Certificate Photo
Key Performance Indicators for Management Administration
ကုမ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပ္ပဏီတစ်ခုလုံး ဌာနတစ်ခုလုံးမှာ ပေါ်လစီများစွာ ပြဌာန်းထားသော်လည်း ၄င်းပေါ်လစီများ အသက်ဝင်လှုပ်ရှားလာစေရန် KPI, Balanced Scorecard, Organizational Metrics များ စနစ်တကျပြဌာန်းနိုင်မှသာ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ယှဉ်ပြိုင်တက်လှမ်းနိုင်ပါလိမ့်မည်။ Read More ↠
General Principles of Business Management
နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာအားလုံးအားအခြေခံမှစ၍ စနစ်တကျနားလည်နိုင်ရန် General Business Management သင်တန်းအားဖွင့်လှစ်ပါသည်။ အဆင့်မြင့် စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းများ၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများ၊ ၀န်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုပုံစံများ၊ ထုတ်ကုန်တိုးတက်မြင့်မားရေးစနစ်များ၊ စီမံကိန်းရေး ဆွဲခြင်း Read More ↠
Human Resource Management ( Functional Level)
စာတွေ့လက်တွေ့လေ့လာချင်သူများအတွက် အထူးရည်ရွယ်သည်။ HR Policy, Pay Structure, SOP များ ရေးတတ်ဆွဲတတ်အောင် သင်ကြားမည်။ Grading, Ranking, Hay Point များ Read More ↠
Human Resource Management (Manager Level)
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်သည် လူသားဗဟိုပြု၍ တီထွင်ဆန်းသစ်မှု၊ ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိမှု၊ရေရှည်မျှော်မှန်းတည်ဆောက်နိုင်မှု၊ လက်တွေ့ဆန်သော မဟာဗျူဟာအခင်းအကျင်းကို တွက်ချက်နိုင်မှုတို့ကို တည်ဆောက်ရင်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရေရှည်ပန်းတိုင်ကို ရှုထောင့်ပေါင်းစုံမှ ချဉ်းကပ်ရယူခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ထက်မြက်သွက်လက်သော HR Manager များအားမွေးထုတ်ပေးရန် Read More ↠
၀န်ထမ်းအရည်အသွေးအကဲဖြတ်သုံးသပ်ရာတွင် အတိုင်းအတာများ(Performance Index) သေချာစီစဉ်တွက်ချက်ခြင်း၊ စိတ်ပိုင်းစစ်ဆေးလွှာများ ပြင်ဆင်ရာတွင် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တစ်ခုချင်းအလိုက်ရှိရမည့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရည်အသွေးများသတ်မှတ်ခြင်း
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ခေါင်းစဉ်တစ်ခုချင်းတွင် အသုံးချစိတ်ပညာ၏ သဘောတရားများ ထည့်သွင်းချိတ်ဆက်ခြင်း ၀န်ထမ်းများအား ဆွေးနွေးအကြံပေးရာတွင် Read More ↠
Strategic Marketing Managemet
မြန်မာ့ဈေးကွက် နိုင်ငံတကာဈေးကွင်တွင် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုများ စနစ်တကျထိုးဖေါက်ရန် ဈေးကွက်နည်းဗျူဟာ၊ မဟာဗျူဟာအခင်းအကျင်းများ ထူးခြားဆန်းသစ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ မားကက်တင်းပညာသည် သီအိုရီပိုင်နိုင်မှု လက်တွေ့နှင့်ချိတ်ဆက် လုပ်ဆောင်တွေးခေါ်နိုင်မှု အစဉ်မပြတ်လိုအပ်ပါသည်။ Case Studies, Read More ↠
Strategic Marketing Project Planning
ဈေးကွက်ဖော်ဆောင်ရာတွင် စီမံကိန်းတစ်ခုအသွင် ရေးဆွဲရန်မှာ ယနေ့ဈေးကွက်ဖွင့် စီးပွားရေးစနစ်တွင် အလွန်အရေးပါပြီး ခက်ခဲနက်နဲသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဈေးကွက်စနစ်များလည်ပတ်ပုံ၊ ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု ပညာ၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ် စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များ၊ ဈေးကွက်ဖြန့်ဖြူးထိုးဖောက်အောင်နိုင်ရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲနည်းများ၊ Read More ↠
Business Project Planning & Monitoring (BPPM)
ကုမ္ပဏီစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးကို ပရောဂျက်အမြင်ဖြင့်ချဉ်းကပ်ရေးဆွဲရာတွင် ငွေကြေးအမြင်၊လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် စီမံခန့်ခွဲမှုအမြင်၊ ဈေးကွက်အမြင်၊ ပြည်တွင်းပြည်ပထိုးဖောက်ဖြန့်ချီရေးအမြင်၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပါတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေအရပ်ရပ် သုံးသပ်သိမြင်ချည်းကပ်ရေးအမြင်စသော Holistic Apporach များတစ်ပြိုင်တည်း ထည့်သွင်းရေးဆွဲမှသာ လက်တွေ့အသုံးဝင်သော Read More ↠
နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီဖို့နိုင်ငံတကာ အဆင့်မှီစိတ်ဓာတ်နှင့် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီ စံလုပ်ငန်းစဉ်များ သင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆွဲတတ်လျှင် ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိဖို့ခဲယဉ်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုလုံး၊ ဌာနတစ်ခုလုံး၏အဓိက လုပ်ငန်းစဉ်များကို စံသတ်မှတ်ခြင်း၊ Logical Network Diagram များရေးဆွဲခြင်း၊ စနစ်ကျသော Read More ↠
Executive Diploma in Human Resource Management (LEB)
လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ပညာနှင့် ပတ်သက်သော မဟာဗျူဟာများ၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများအတွင်း HR ပညာရပ်များအားအသုံးပြုပုံများ၊ ကုမ္ပဏီဌာနအားလုံး၏စီမံကိန်းများ၊ ပေါ်လစီများလက်တွေ့ဆောင်ရွက်ရာတွင် HRမဟာဗျူဟာများနှင့်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပုံများ နိုင်ငံတကာယှဉ်ပြိုင်မှုတွင် HR၏အရေးပါပုံ၊ နောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာနှင့်အတွေးများ၊ အဖွဲ့အစည်းအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းများ ရေးဆွပြဌာန်းအကောင်အထည်ဖော်ပုံများပါဝင်သည်။ Read More ↠
Executive Diploma in Marketing Management (LEB)
ဈေးကွက် သဘာဝနှင့် စားသုံးသူ အပြုအမှုတို့ကို အသေးစီတ်သိရှိမှသာ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖြန့်ဖြူးမှု၊ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထူထောင်မှု၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုတို့ကို ကမ္ဘာ့အဆင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်လိမ့်မည်။ ထုတ်ကုန်၊ ဈေးနှုန်းအရောင်းမြှင့်တင်မှု၊ အလုံးစုံဈေးကွက် ဆက်ဆံရေး၊ အရောင်းဝန်ထမ်းများအား လေ့ကျင့်သင်ကြားမှုစနစ်များ၊ Read More ↠
Executive Diploma in Management (LEB)
အင်္ဂလန်အစိုးရနိုင်ငံတကာ တက္ကသိုလ်များ LEB, TQUK, OFQUAL တို့၏ ကမ္ဘာ့အဆင့်သတ်မှတ်ခံရသော ဒီပလိုများဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းခွင် ဌာနနယ်ပယ်အားလုံး၏ လုပ်ငန်းအဆင့်ဆင့်ကို စီမံခန့်ခွဲနိုင်ရန် စီမံခန့်ခွဲမှု အခြေခံသဘောတရားများ ဈေးကွက်ထိုးဖောက်ဖြန့်ဖြူးမှုနည်းဗျူဟာများကို Read More ↠
Master of Business Administration In Human Resource Management (MBA in HRM,Paris)/PCHRM(USA)
Executive Diploma in Human Captial Management
Human Captial Management, HCM သည် HR professional အဆင့်သို့ တက်လှမ်းလိုသူများ လုပ်ငန်းရှင်များ အတွက်သီခြား ဖွင့်လှစ်သောသင် တန်းဖြစ်ပါသည်။ ဌာနတစ်ခုချင်း ရာထူးအဆင့် Read More ↠
Executive Diploma in logistics Management
နိုင်ငံတစ်ကာ ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး ပြည်တွင်း၊ပြည်ပဖြန့်ဖြူးရေးCompany များအတွက် အလွန်အရေးပါသောသင်တန်းဖြစ်သည်။
ဈေးကွက်ဖွင့်ဝါဒနှင့်အတူ ပြောင်းလဲလာသောကမ္ဘာဈေးကွက်၊ ပြည်တွင်းဈေကွက် အနေအထား၊ စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်သစ်များ၊ သယ်ယူပ်ို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်း
များ၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်းသိုလှောင်ခြင်းနည်းဗျူဟာများ၊ ကုန်ကြမ်းဝယ်ယူမှုနှင့် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု့စနစ်များ၊ ကုန်စည်လိုအပ်ချက်စီမံကိန်းရေး
ဆွဲခြင်း၊ Read More ↠
Food Safety Management Tools in Food Manufacturing,( Level 1 )
Food Safety Management Tools in Food Manufacturng, Level 1 & 2,
နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု အစားအသောက် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးဆိုင်ရာ Read More ↠
ယနေ့မြန်မာနိုင်ငံမှ အတည်ပြုထားသော တည်ဆဲအလုပ်သမားရေးရာ ဥပဒေများတွင် လက်တွေ့ကျင့်သုံးရာ၌ အလုပ်သမားများနှင့်အသက်ဆိုင်ဆုံးသော ဥပဒေပြဌာန်းချက်များကိုထုတ်နုတ်ရှင်းလင်းပို့ချခြင်း
အလုပ်ရှင်၊အလုပ်သမားခန့်ထားမှုဆိုင်ရာနှစ်ဦးသဘောတူစာချုပ် - EC စာချုပ်ဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမား၊အလုပ်အကိုင်နှင့်ပြည်သူ့ အင်အာဝန်ကြီးဌာန၏ (28.8.2017) ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၄၀/၂၀၁၇) ပါအလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင် Read More ↠
Food Safety Management Tools in Food Manufacturing Level (2)
စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းစက်ရုံများအတွက် အစားအသောက်ဘေး အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းစနစ်များကို
Human Resource Planning and Documentation
HR Theory နဲ့ Principles စည်းမျဉ်းတွေပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုရင် HR Plan အသေးစိတ်ဆွဲတတ်ဖို့ လိုအပ်လာတဲ့အပြင် HR formats တွေ ကျွမ်းကျင်စွာ ကိုယ်တိုင်ရေးနိုင် ကိုယ်တိုင်ဆွဲနိုင် Read More ↠
My - SOUP Development Program(Management for Youth)(Sociology,Optimism,Universality,Personality)
ယနေ့ ၂၁ ရာစုကိုပညာရှင်များကအသိပညာခေတ်ဟုပညာရှင်များက တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်းသတ်မှတ်ထားကြသည်။"ပညာခေတ်"ဟုဆိုလျင် "ပညာကိုမည်သို့ဖြန့်ဝေပြီး မည်သို့လေ့လာသင်ယူမည်ဆိုသောသင်ကြားမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ထိုကြောင့် ၂၁ရာစုကို သင်ကြားမှုလူ့အဖွဲ့အစည်း (Learning Society) ဟုလည်းခေါ်သည်။ထိုသင်ကြားမှုလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင် အရွယ်သုံးပါးစလုံးပါဝင်နေသည်။ပညာသင်မှုတွင် အသက်အရွယ်အပိုင်းအခြားအလိုက်အလိုက် အရေးပါနေသော်လည်းတကယ်တမ်းတွင် ကလေးသူငယ်ဘ၀ကရှေးဦးသင်ကြားမှုသည်သာ Read More ↠
Master of Business Administration In Management (MBA in Management,Paris)/PCHRM(USA)
EGS (European Global School) သည် France, Read More ↠
Customer Relationship & Services Management
Ethical Influencing & Persuasive Skills in Corporation
Financial Management for Non-Financial Manager
HR For Non HR Management
Writing Job Description & Standard Operating Procedures in International Organizations
Business and Strategy: Key Performance Indicators Workshop
Sales & Marketing Techniques in Myanmar
The 5S’s: Workplace Organization Course Outline
Time management & file management
No. 5/5B, U Htun Lin Chan St, Hledan, near hledan centre, Kamayut Township
01-2306255, 01-500027,09-777759031, 09-777759013, 09-777710061, 09-777710062
© 2015-2021 TALENT HIGHWAY. All rights reserved.
Web Application by NetScriper
Responsive Web Application by NetScriper